Guddoomiye Mursal Oo Ka Guuray Madaxtooyada Sheegayna In Uu Sharci Yahay Mooshinka Laga Keenay Madaxweynaha – Kalfadhi
Guddoomiye Mursal Oo Ka Guuray Madaxtooyada Sheegayna In Uu Sharci Yahay Mooshinka Laga Keenay Madaxweynaha
Inkastoo weli jirto xiisaadda ka dhalatay soojeedinta kalsooni kala noqoshada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan qoraal uu soo saaray maanta waxa uu si aan faah-faahsaneyn uga hadlay mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha.
Guddoomiye Mursal ayaa qoraalka uu soosaaray waxa uu ku sheegay in soojeedinta xil ka qaadista Madaxweynaha ay waafajin doonaan waxa uu qabo dastuurka KMG ah ee dalka, taas oo ka dhigan in uu aqbalsan yahay mooshinka laga keenay madaxweynaha.
Qoraalka Guddoomiyaha ayaa u dhignaa, “ Maalinkii Axadda ahayd ee taariikhdu ku beegneyd 9-ka bisha December waxaa xildhibaanno kamid ah Golaha Shacabka ay noo soo gudbiyeen hindise xil ka-qaadisa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo ay ku saxiixan yihiin 92-mudane oo Golaha Shacabka ah. Sida ku cad qodobka 92-aad farqadiisa 1-aad iyo 2-aad ee dastuurka federaalka iyo 20-aad farqadiisa 1-aad ee xeer-hoosaadka Golaha, hidisahaan waxaa la waafajin doonaa sida uu qabo dastuurka dalka iyo xeer-hoosaad Golaha Shacabka”.
Xildhibaannada92da ah ee uu guddoomiyuhu ku muujiyey qoraalkiisa in ay soo gudbiyeen mooshinkaka dhanka ah madaxweynaha, 14-mudane oo kamid ah ayaa si cad warbaahinta ugusheegay in laga been abuurtay oo aysan raali ka ahayn soojeedinta hindisaha kadhanka ah Madaxweyne farmaajo.
Qoraalka kasoo baxay guddoomiye Mursal ayaa imaanaya iyadoo uu ka guuray hoygii uu kagadanaa Madaxtooyada Soomaaliya, isago dagay hotel ku yaalla agagaarka garoonkadiyaarada Muqdisho.